Xiliga uu bilaabi doono Hazard waayihiisa ciyaareed ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey – Gool FM
(Madrid) 21 Agoosto 2019. Xiddiga reer Belgian iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Eden Hazard ayaa qarka u saaran inuu waayihiisa ciyaareed uu ka bilaabo horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Xiddiga reer Belgiam ee Hazard ayaa ku biiray kooxda Los Blancos suuqan xagaaga, kaddib markii uu Chelsea kaga soo dhaqaaqay 100 milyan ginni, xili heshiiskiisa Blues uu ka harsanaa hal sano.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain oo si aad ah ugu dhow kooxda Real Madrid ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Eden Hazard waayihiisa ciyaareed ee horyaalka La Liga uu kaga bilaaban doono kulanka Levante ee ka dhici doono garoonka Santiago Bernabéu 14-ka bisha September ee soo aadan.
Xiddiga reer Belgian ee Eden Hazard ayaa ka dhigan inuu ka maqnaan doono kooxda Real Madrid 3-da kulan ugu horeysa ee horyaalka La Liga dalka Spain kahor inta uusan soo laabanin kulanka Levante.
Hazard ayaa heli kara warqada ogolaanshiyaha caafimaadka, si uu kaga qeyb galo labada kulan ee xulkiisa qaranka Belgian ee isreeb-reebka koobka Euro 2020, taasoo fursad u siineysa inuu taam noqdo ka hor Levante.